माइक्रोटिटर प्लेट मास नमूना तयारी - हिल्सचर
माइक्रोटिटर प्लेटहरू, बहु-अच्छी प्लेटहरू, 96--वेल प्लेटहरू वा ELISA प्लेटहरू जैविक नमूनाहरूको सामूहिक नमूना खेती र प्रशोधनको लागि प्रयोग गरिन्छ। माइक्रोटरिटर प्लेट अल्ट्रासोनिकेटर UIP400MTP का साथ, हिल्सचरले 96-वेल प्लेटहरूको वर्दी र भरपर्दो नमूना तयारीको अनौंठो अल्ट्रासोनिक समाधान प्रस्ताव गर्दछ। माइक्रोटिटर अल्ट्रासोनिकेटर UIP4000MTP को साधारण अनुप्रयोगहरूमा सेल lysis, प्रोटिन निकासी, सेल होमोजेनाइजेशन र solubilization साथ साथै डीएनए विखंडन समावेश छ।
अल्ट्रासोनिकेटर UIP400MTP का साथ जन नमूना तयारी
माइक्रोटाइटर प्लेटहरू र 96 well-वेल प्लेटहरू नमूनाहरूको एक साथ ठूलो संख्यामा ह्यान्डल गर्न र प्रशोधनको लागि उपकरणहरू हुन्। यसको नाम "---कूवा प्लेट" ले पहिले नै स indicates्केत गर्दछ, माइक्रो-वेल प्लेटहरूमा well well वटा छन् र यसैले individual individual व्यक्तिगत नमूनाहरू समात्न सक्छन्। नमूना तयारी विश्लेषण अघि, उदाहरणका लागि सेल आधारित Assays अघि (जस्तै ELISA वा PCR) को लागी सेल lिसिस, सेल अवरोध साथै प्रोटीन निकासी र अन्य लक्षित intracellular अणुहरु जारी। अल्ट्रासोनिक सेल lysis र निकासी उच्च-गुणवत्ता नमूना तयारी को एक लामो समय र राम्रो तरीकाले स्थापित विधि हो। अल्ट्रासोनिक सेल lysis र प्रोटीन निकासी प्रोटोकल को अनुसार प्रदर्शन गरिन्छ र यसरी दोहोरिने योग्य र विश्वसनीय परिणाम दिन्छ। द्रव्यमान नमूना अल्ट्रासोनिकेटर युआईपी 00०० एमटीपी एक 400०० वटा शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक प्रणाली हो जुन अल्ट्रासोनिक तरंगहरूको अप्रत्यक्ष रूपले बहु-वेल प्लेटहरूको पर्खाल मार्फत नमूना माध्यममा जोड्दछ। प्रत्येक sample sample नमूना कुवाहरू ठीक त्यस्तै अल्ट्रासोनिक तीव्रताका साथ बेसुक्क गरिन्छ जसको परिणामस्वरूप उत्कृष्ट सेल लिसीस र निकासी उत्पादन हुन्छ।
UIP400MTP MassSample Ultrasonicator का लाभहरू
Samples samples नमूनाहरूको वर्दी Sonication
एक साथ सामूहिक नमूना तयारी
निश्चित रूपमा नियन्त्रण योग्य Sonication प्यारामिटरहरू (आयाम, अवधि, चक्र, तापमान)
पुन: उत्पादन योग्य, दोहोरिने योग्य परिणामहरू
सुविधाजनक र सुरक्षित अपरेशन
UIP400MTP का लागि अप्रत्यक्ष, अझै सूक्ष्म अच्छी प्लेटहरूको गहन Sonication।
माइक्रोटेटर प्लेट Sonication समयमा सटीक तापमान नियन्त्रण
UIP400MTP एक 400 वाट शक्तिशाली अल्ट्रासोनिकेटर हो, जसले अल्ट्रासाउंड तरंगहरू र कम्पनहरू अप्रत्यक्ष रूपमा माइक्रोटरिटर प्लेटको पर्खालहरूमा नमूनाहरूमा प्रसारण गर्दछ र मध्यममा काभेटेशन र कतरन शक्तिहरू सिर्जना गर्दछ। सबै मेकानिकल सेल अवरोध विधिहरूको रूपमा, Sonication गर्मी सिर्जना गर्दछ। जे होस्, वैकल्पिक सेल अवरोध विधाहरूको विपरीतमा, UIP400MTP ले परिष्कृत तापमान अनुगमन र तापक्रम सीमाको पूर्व-सेटि settingको लागि अनुमति दिन्छ जैविक नमूनाहरूको कुनै तापीय गिरावट रोक्न।
UIP400MTP स्मार्ट सफ्टवेयर संग सुसज्जित छ। डिजिटल टच स्क्रीन मार्फत, मेनू सजिलैसँग पूर्व-सेट तापमान सीमामा पहुँच गर्न सकिन्छ र तपाईंको नमूना रनको लागि कुल ऊर्जा इनपुट प्रोग्राम गर्न।
नमूना तापमान अनुगमन: मल्टि नमूना अल्ट्रासोनिकेटर UIP400MTP एक बुद्धिमान सफ्टवेयर र प्लग करने योग्य तापमान सेन्सरले सुसज्जित छ। तापक्रम सेन्सर UIP400MTP मा प्लग गर्नुहोस् र माईक्रोटेटर कूवाहरूमा तापक्रम सेन्सरको टिप घुसाउनुहोस्। डिजिटल रंगीन टच-डिस्प्ले मार्फत, तपाईं UIP400MTP को मेनूमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको नमूना Sonication को लागी एक विशिष्ट तापमान सीमा। अल्ट्रासोनिकेटर स्वत: रोकिनेछ जब अधिकतम तापमान पुग्यो र रोक्नुहोस् जबसम्म नमूना तापक्रम सेट तापमानको कम मानमा नपर्दछ ∆। त्यसपछि Sonication फेरि स्वत: सुरु हुन्छ। यो स्मार्ट सुविधा गर्मी प्रेरित गिरावट रोक्छ।
यदि सम्भव छ भने, तपाइँले माइक्रोटीटर प्लेट र यसको नमूनाहरू महत्त्वपूर्ण तापक्रम सीमामा पुग्न स्थगित गर्न पूर्व-शीतल गर्न सक्नुहुन्छ।
UIP400MTP माइक्रोटरिटर प्लेट / 96--राम्रो प्लेट Sonication को लागी
विश्वव्यापी ग्राहकहरु हिल्सचर UIP400MTP का उपयोग मल्टी-वेल प्लेटहरुमा भरपर्दो, प्रजनन योग्य र जन नमूनाहरु को सुविधाजनक तयारी को लागी। UIP400MTP ले जैविक, जैव रसायन, जीवन विज्ञान, चिकित्सा र क्लिनिकल प्रयोगशालाहरूमा उनीहरूको दैनिक कामको सुविधा दिन्छ। बौद्धिक सफ्टवेयर र हिल्सचर UIP400MTP को तापमान नियन्त्रणको साथ, तापमान विश्वसनीयतापूर्वक नियन्त्रण गरिन्छ र तातो-प्रेरित नमूना गिरावट हटाइन्छ। हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्सको UIP400MTP का साथ अल्ट्रासोनिक नमूना तयारीले अत्यधिक विश्वसनीय र पुन: उत्पादन योग्य परिणामहरू प्रदान गर्दछ!
UIP400MTP का लागि अनुप्रयोग र मूल्य सहित तपाईंको निःशुल्क जानकारी प्याकेज अनुरोध गर्नुहोस् तलको फारम भर्न वा ईमेल वा फोन मार्फत आज हामीलाई सम्पर्क गर्दै!
उच्च खण्डहरू प्रशोधन गर्न अल्ट्रासोनिक प्रणाली खोज्दै हुनुहुन्छ? तलको तालिकाले तपाइँलाई हाम्रो अल्ट्रासोनिक्सको अनुमानित प्रकृया क्षमताको संकेत दिन्छ:
UIP400MTP माइक्रोटरिटर प्लेट / बहु-राम्रो प्लेट Sonication को लागी
माइक्रोटरिटर प्लेटहरू के हुन्?
माइक्रोटिटर प्लेटहरू, जसलाई 96--वेल प्लेटहरू, 96--वेल माइक्रोप्लेट्स, बहु-वेल प्लेटहरू वा इलिसा प्लेटहरू पनि भनिन्छ, आयताकार बहु-कल्याण प्लेटहरू हुन् जुन प्रयोगशालामा व्यापक रूपमा संस्कृति कक्षहरू, सेलुलर नमूनाहरू प्रशोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ। माइक्रोटिटर प्लेटहरू सामान्यतया इनिसा र पीसीआरको रूपमा मनिफोल्ड एसेजमा प्रयोग गरिन्छ। अधिकतर-well वेल प्लेटहरू उच्च थ्रोपुट कार्यप्रवाहहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो र विश्लेषणात्मक उपकरणहरू र रोबोटिक ह्यान्डलिंग र प्रसंस्करणसँग मिल्दो छ। त्यसकारण बहु रूपहरू जस्तै रोबोट प्लेटफर्मको लागि पूर्ण स्किर्टेड प्लेटहरू, नन-स्किर्टेड, अर्ध-स्किर्टेड, र बार नमूना प्लेटहरू सामूहिक नमूना प्रशोधनको लागि अनुकूलित गरिएका उपलब्ध छन्।
माइक्रोटेटर प्लेटको सामान्य प्रयोगले अनुप्रयोगहरू समावेश गर्दछ जस्तै नमूना स collection्ग्रह, कम्पाउन्ड तयारी, कम्बानेटरियल रसायन विज्ञान, उच्च थ्रूपुट स्क्रिनिंग, न्यूक्लिक एसिड शुद्धिकरण, ब्याक्टेरिया संस्कृति वृद्धि, र प्लेट प्रतिकृति।